Xaafado ka tirsan Muqdisho oo saaka ku waabariistay Baaritaano xoogan – SBC
Xaafado ka tirsan Muqdisho oo saaka ku waabariistay Baaritaano xoogan
Ka dib Madaafiic toboneeyo ah oo Axadii habeenkeeda lagu garaaacay Aqalka Madaxtooyada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho islamarkaana ay sheegteen masuuliyadaasi Xarakada Alshab aab ayaa maanta Muqdisho gaar ahaan xaafadaha ku xeeran Xarunta madaxtooyada laga dareemay howlgalo ay wadaan ciidamada Police-ka Dowlada .
Sida ay ku soo waramayaan wariye yaasha SBC ee Caasimada howgladan ayaa saaka hirtii waaberi laga dareemay xaafado ka mid ah Degmada Wardhiigley ama warta nabadda, waxaana lagu waaberiistay askar u badan Police oo qofkii indhaha kala qaadaba baaritaan kula dhaqaaqayay.
Dadweynaha degen xaafadaasi ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ay arki karayaan saaka dhalinyaro aad u tiro badan oo ka mid ah kuwa xaafada degen oo safaf dhaadheer la geliyay laguna sameynayo baaritaano xoogleh.
Inkastoo Howlgalkani la xaqiijin karin in ay daba socdaan madaafiicdii lagu garaacay Madaxtooyada, hadana waxaa la rumeysan yahay jiritaanka tuhun ama xog ay heleen ciidanka islamarkaana ay ku dhaqaaqeen howlgalkani.
Xarakada Alshabaab ayaa sheegatay madaafiicdii lagu garaacay Xarunta Madaxtooyada habeen ka hor iyagoo saxaafada ka shaaciyay in ay 10 madaafiic ku rideen goobo ka mid ah madaxtooyada oo ay ku sugnaayeen ciidamada Amisom ayna ka soo gaaartay khasaare dhimasho tiro badan waasida hadalka loo dhigaye.